Iithoyi ezincinci kwifoto kaHernandez | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ubuchule bokufota kwezi zinto zincinci zokudlala ngumfoti uHernandez
UAron Tiley wasithatha ngaphambili sisindululo esikhethekileyo kunye neefoto ezibamba loo mzuzu apho kukho into eyintlekele okanye eyoyikisayo eza kwenzeka. Umsebenzi olungiselelwe ukufumana oko kubanjwa kushiya umbukeli ephantse ekhala kuloo mzuzwana ulandelayo apho imigca emisiweyo yemidlalo sele iza kuphoswa.
Into efanayo iyenzeka kuthi ngokufota kukaHernandez apho ubukrelekrele bakhe busivumela ukuba sisondele kwiifoto ezithile zentsusa apho abalinganiswa abaziintloko ziithoyi ezincinci ezibonakala ngathi ziyimifanekiso ezotywe ngesandla, xa zenziwe nje ngokutsha ukuba zibonelele ngeendlela ezahlukeneyo.
Umfoti waseMexico uFelix Hernandez Rodriguez Unomphefumlo wayo womntwana kwaye oku kumenza abe nobuchule bokuyila kwisindululo ngasinye ngohlobo lokufota alucebisayo kolu luhlu lweefoto. Iithoyi ezincinci liziko elinombono omncinci onokwenza i-atmospheres ezahlukileyo ezibeka icing kwikhekhe.
UFélix ugcina ukuba ukufota kwakhe akuyiyo into ekhoyo phaya, kodwa ibonisa oko kusentloko yakho okanye ingqondo. Umfaki-zithombe udala izigcawu zomlingo ngoncedo lweemveliso zemihla ngemihla ezinjengeflororide kwintlama yamazinyo ukwenza ikhephu okanye umsi wecuba ukuze ungeze umoya othile kwifoto.
Felix xuba iimodeli zokwenyani kunye nezikali ngoncedo lwengcinga yakho kunye neFotohop encinci. Ubuye asebenzise iilensi ezinkulu kunye nobuchule obubizwa ngokuba yi "stacking stacking", evumela iifoto ezininzi kunye ukwenza ujoliso olubanzi.
Umfoti ongubani ubambeke kwiifoto zakho kwaye oko kuyibonisa kakuhle kweyakhe iphepha lakho le-facebook okanye ngeyakho iprofayile kwi-500px. Iindawo ezimbini apho unokufumana khona yonke imihla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ubuchule bokufota kwezi zinto zincinci zokudlala ngumfoti uHernandez
UAlin padilla sitsho
UFeliks Alejandro Hernández Rodríguez
Phendula u-Alin Padilla
UFeliks Alejandro Hernández Rodríguez sitsho
Molweni noAlincita !!! .. enkosi ngokwabelana… Hug!
Phendula kuFeliks Alejandro Hernández Rodríguez
Enkosi kubahleli beCrevivos ezikwi-Intanethi ngokwabelana ngomsebenzi wam. Ukubulisa.
UAle Jerezano sitsho
Phendula u-Ale Jerezano
Wamkelekile Felix! Uyolo lolwethu :) Umsebenzi omkhulu!
UMirna Mugas sitsho
Phendula uMirna Mugas
URamiro Romcevich sitsho
"Iithoyi" ezincinci ..
Phendula kuRamiro Romcevich
Ewe ... hahaha yile nto bayiyo emva kwayo yonke loo nto! Ngaphandle kokuba iphile ebusuku